Rex Tillerson:Diyaar ayaan u nahay wadaxaajood aan la galno K/Waqooyi' - BBC News Somali
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka , Rex Tillerson, ayaa sheegay in Mareykanka ay diyaar u yihin wadaxaajood ay la galaan Kuuriyada waqooyi.
Mr Rex Tillerson ayaa sheegay in dowladda Mareykanka aysan wax shuruud ah ku xiri doonin wadahadalada Kuuriyada Waqooyi.
Xoghayah arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr Tillerson ayaa ka digey in wadahadalada ay suuragal noqon karaan oo kali ah haddii la heli waqti cayiman oo aysan Kuuriyada Waqooyi tijaabin hubka Niyukleerka.
Soo bandhigida uu wadahadalada soo bandhigay mr Tillerson ayaa u muuqta mid ka duwan dalabkii hore ee Mareykanka ee ahaa in Kuuriyadda waqooyi ay gabi ahaanba joojiso barnaamijkeeda hubka Niyukleerka.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee mareykanka Mr Tillerson ayaa sidoo kale sheegay in Shiinaha ay sameeyeen qorsha ay ugu diyaargaroobayaan in ay qaabilaan qaxooti ka socda Kuuriyada waqooyi haddii uu dagaal dhaco.
Madaxwayne Trump ayaa horrey ugu baaqay in xoghayihiisa arrimaha dibadda uusan waqti isaga lumin wadahadal lala galo Kuuriyada Waqooyi.